यो हो संसारकै सबैभन्दा महँगो धातु, १ ग्रामकै पर्छ रु. ६९४ लाख करोड, आधा किलोमै विश्व ध्वस्त पार्ने क्षमता Bizshala -
यो हो संसारकै सबैभन्दा महँगो धातु, १ ग्रामकै पर्छ रु. ६९४ लाख करोड, आधा किलोमै विश्व ध्वस्त पार्ने क्षमता
काठमाण्डौ । संसरमा सबैभन्दा महँगो धातुको कुरा हुँदा सबैभन्दा पहिला हाम्रो दिमागमा सुन, चाँदी र हीराको नाम पहिला आउँछ । तर यी संसारकै महँगा धातु भने होइनन् ।
संसारमा यस्तो धातु पनि छ जुन निकै महँगो छ । सायद मानिसले यो धातुको नाम पनि सुनेका छैनन् होला ।
संसारकै महँगो धातु हो एन्टीम्याटर । एन्टीम्याटर १ ग्रामको ६.२५ लाख करोड डलर पर्छ । अर्थात नेपाल मूल्य ६९४.२८ लाख करोड रुपैयाँ ।
एन्टीम्याटर महँगा हुनुको प्रमुख कारण भनेको यसलाई बनाउन प्रयोग गरिने प्रविधि निकै खर्चालु रहेको छ । १ मिलिग्राम एन्टीम्याटर बनाउन ४०० लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । –एजेन्सी
Anitmeter: An precious m